SOMALITALK - GEORGIA
Dahabshiil Atlanta oo Heshey Shatiga Cusub ee Lacag Diridda Gobolka Georgia .
Todobaadkan bilowgiisa ayaa loo soo direy shirkadda Dahabshiil xafiiskeeda Atlanta shati loogu ogolaanayo diridda lacagaha. Gobolka Georgia ayaa dhowaan ka soo baxay sharci cusub oo faraya dadka dira lacagaha in ay qaataan shati cusub oo dhowaan soo baxay kaa soo la dhigayey Bond dhan $50,000.
�� Dahabshiil oo durbadiiba codsatey shatigaasi waxaa farxad noo ah oo aan u sheegeynaa macaamiisheena Georgia in aan helney shatigii ogolaanshaha lacag diridda ,ayna dahabshiil sidaa ku noqotey shirkaddii ugu horeysey ee gobolkan Georgia ka hesho sharciga ogolaanshaha diridda lacagaha.
� SHirkadda Dahabshiil waxay mar walba ku dadaashaa inay u hogaansanaato sharciyadda ka jira dalkan Mareykanka ,waxayna hore u heshay sharciyadda goboladda Ohio,Maine,Verginia,Tenesee,Missiuri iyo kuwa kale .
Mamulaha Dahabshiil Atlanta
WARARKII HORE EE SHIRKADDA DAHABSHIIL... GUJI